Raysul Wasaare Cabdi Weli iyo taliyaha ciidamada Itoobiya oo kulan yeeshay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Raysul Wasaare Cabdi Weli iyo taliyaha ciidamada Itoobiya oo kulan yeeshay
A warsame 15 February 2014 4 April 2019
Addis Ababa – Mareeg.com: Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya Cabdiweli Sheekh Axmed oo booqasho ku jooga Itoobiya ayaa maanta la kulmay Taliyaha Ciidanka Xoogga dalka Ethiopia, Jeneral Samora Muhammad Yunis.
Kulanka uu la qaatay Ra’iisul Wasaaraha Taliyaha ciidanka xoogga dalka Ethiopia ayaa looga wada halday xoojinta ammaanka iyo sidii Alshabaab looga saari lahaa goobaha ay weli dalka kaga sugan yihiin.
Ra’iisul Wasaare Cabdiweli iyo wafdigiisu ay booqasho ku tagay mid kamid ah xarumaha ay leedahay warshadda weyn ee dalka Ethiopia ee lagu magacaabo Metal and Engineering corporation (METEC), taasi oo qabata howlo kala duwan oo ay kamid yihiin samaynta qalabka baabuurta, baabuurta ciidanka iyo rasaas.
Itoobiya waxaa Soomaaliya ka jooga kumanaan ciidamo ah oo qaarkood dhawaan ka mid noqdeen kuwa Midowga Afrika ee AMISOM.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya C/weli Sheekh Axmed ayaa horay ula kulmay dhiggiisa dalka Itoobiya Hailemariam Desaleng iyagoo kawada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo sidii Itoobiya ay qayb uga qaadan lahayd howlgallada Alshabaab looga saarayo gobollada ay maamulaan.
Xus kooban oo Muqdisho loogu sameeyey maalinta ciidamada cirka Soomaaliya